Nin dhaawac u geystay Imaamka Masjidka dhexe ee Waqooyiga London oo la hor keenay… – Hagaag.com
Nin dhaawac u geystay Imaamka Masjidka dhexe ee Waqooyiga London oo la hor keenay…
Posted on 23 Febraayo 2020 by Admin in Lifestyle // 0 Comments
Eedaysanahii loo qabtay inuu mindi geliyey Imaamka Masjidka dhexe ee Waqooyiga London oo la hor geeyey maxkamad Sabtidii asagoo lagu eedeeyey inuu geystay dhaawac jireed oo halis ah, waxayna maxkamaddu amartay in lagu sii hayo xabsiga ilaa laga bilaabayo maxkamadiisa bisha March 20da ee soo socota.
Booliska magaalada London ayaa sheegay in Daniel Horton, oo 29 jir ah, oo guri la’aan ah, uu ka soo hor muuqday maxkamadda Westminster ee Koowaad, kaas oo sidoo kale lagu soo eedeeyay inuu haystay qalab af leh iyo inuu ku xadgudbay amar xaddidayay dhaqdhaqaaqiisa inkastoo aysan xiriir la laheyn kiiska, laakiin waxay markiiba meesha ka saartay jiritaanka ujeedooyin argaggixiso oo ka dambeeyay shilkii dhacay.
Horton waxaa lagu eedeeyay inuu tooreyey Imaamkii iyo Mu’adinkii Masjidka dhexe ee London Raafat Muqallad, 70 jir ah, meel u dhow Regents Park khamiistii lasoo dhaafay inta lagu guda jiray salaada casarka, inta aynan qaban dadkii goobtaasi ku cibaadeysanayey oo markii dambe ku wareejiyey booliska.
Muqallad ayaa tooreyda laga geliyey qoorta hoosteeda, laakiin maalintii ku xigtay wuxuu ku laabtay shaqadiisa.Waxaana lagu daweeyey cisbitaal ku yaal London, wuxuu Masjidka ku soo noqday Jimcihii si salaada Jimcaha dadka uga bixiyo, wuxuu u sheegay suxufiyiinta “aniga waan cafiyey, waxaan dareemayaa inaan ka xumahay wixii uu sameeyey”, wuxuu ku daray “maadaama qof Muslim aan ahay qalbigeyga ma qaadayo naceyb iyo xumaan.”
“Waxaan kaliya dareemay dhiig ka imanaya qoortayda, taasina waa waxa dhacay oo keliya, waxay ii kaxeeyeen cisbitaalka, wax walbana si kadis ah ayey udhaceen,” Imaamka Masjidka ayaa u sheegay BBC.
Xeer ilaaliyaha Tania Dougra ayaa u xaqiijisay maxkamada in Muqallad loo geystay dhaawac dhinaca qoorta ah.
Waxay intaas ku dartay in labada nin ay is yaqaaneen, maxaa yeelay Horton wuxuu tegi jiray masaajidka dhexe ee Regent’s Park, waqooyiga-galbeedka ee London, sanadihii lasoo dhaafay.
Rai’isul wasaaraha Ingiriiska Boris Johnson ayaa dhalleeceeyay dhacdada, isagoo sheegay inuu aad uga xun yahay inuu wax ka ogaado weerarka, wuxuuna bartiisa Twitter ku soo qoray: “Waa wax laga naxo in tani ay dhacday, gaar ahaan goob cibaado, waxaan u tacsiyeynayaa dhibanaha iyo qof walba oo ay dhibaatadu saameysay.”